Nezve UAE | Mutemo Makambani Dubai
United Arab Emirates (UAE) yakanzi ive nyika yakasununguka musi wa 2 Zvita, 1971, mushure mekudzora hutongi hweBritain. Iyo UAE inogadzirwa ne7 Emirates, ayo ari Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, uye Fujairah, na Abu Dhabi akasarudzwa sedhorobha.
Nharaunda dzakavakidzana dzePersian Gulf.
kukura expat nharaunda
Iwo maEU makuru emubatanidzwa anosanganisira iyo UAE Supreme Council, inova ndiyo bumbiro repamusoro munyika uye inosanganisira vatongi veEmirates vanomwe, Mutungamiriri weAUE, Mutevedzeri weMutungamiri, Mutungamiriri, Federal National Council, uye Federal Judiciary .
UAE iri munzvimbo yekumabvazuva kweArabian Peninsula, iyo inowedzera pamwe chikamu cheGulf of Oman uye mahombekombe egungwa ekumaodzanyemba kwePersian Gulf. Kumaodzanyemba uye kumaodzanyemba kwenyika ndeye Saudi Arabia, kuchamhembe ndeye Qatar, uye kumabvazuva ndeyeOman. Nyika inofukidza dzinosvika 82,880 km2, uye Abu Dhabi inosvika pamusoro pe87 muzana yenzvimbo yakazara yenyika.
Iyi nharaunda yakatanga kugarwa nevashandi vengarava avo vakazozotendeukira kuIslam muzana remakore rechinomwe. Nekudaro, kwemakore anoverengeka, sekete raipokana rinodaidzwa kuti maCarathi, rakagadzira sheikdom rine simba, ndokukunda Mecca. Nekuparadzwa kweiyo sheikdom, vanhu vayo vakaitwa pirates.
Mapirisiti akatyisidzira Muscat naOman Sultanate mukutanga kwezana ramakore re19, izvo zvakamutsidzira kupindira kweBritain uyo akasimbisa zvisungo muna 1820 uye mushandirapamwe muna 1853. Saka Pirate Coast yakare zita reTricial Coast. Nyika pfumbamwe dzeTroperities dzakachengetedzwa neBritish, kunyangwe, hadzina kupihwa sekoloni.
Muna 1971, Britain yakabva kuPersian Gulf, uye nyika dzeTrusive dzakava mubatanidzwa unonzi United Arab Emirates (UAE). Nekudaro, Bahrain naOman, mbiri dzenyika dzeTrivatives dzakaramba kubatana, izvo zvakaita kuti huwandu hwenyika dzive nomwe. Chibvumirano chemauto ekudzivirira chakasainwa neUS muna 1994 uye chimwe neFrance muna 1995.
United Arab Emirates ine nzvimbo inopisa uye ine hunyoro mumahombekombe uye inotopisa uye yakaoma mukati. Kunaya kwemvura kunosvika maawa mana kusvika matanhatu mukati, asi izvi zvichisiyana kubva kune rimwe gore kusvika kune rimwe. Tembiricha yaJanuary tembiricha 4 ° C (6 ° F), asi muna Chikunguru, tembiricha tembiricha 18 ° C (64 ° F).
Muzhizha, tembiricha inogona kusvika pakakwirira kusvika 46 ° C (115 ° F) pamhenderekedzo uye anopfuura 49 ° C (120 ° F) kana kupfuura mugwenga. Mhepo dzinozivikanwa seye shamal pakati nepakati uye yekutanga kwezhizha inovhuvhuta ichibva kuchamhembe nekuchamhembe kwakadziva kumadokero, iine jecha neguruva.
Vanhu uye Tsika
Iyo UAE inorumbidza inoshivirira uye inodakadza vagari venzvimbo, vakazvipira zvakanyanya kune avo ezera-tsika tsika uye tsika. Vagari venzvimbo ino vanoumba chikamu chimwe chete pazvipfumbamwe zvevagari veEmirates. Vamwe vese vanonyanya kushandira kunze uye nevanovasiya, avo maSouth Asia vanoumba hukuru.
Chikamu chakakosha zvakare chinobatanidza maArabu kubva kune dzimwe nyika kunze kweUnited Arab Emirates neIran. Munguva dzichangopfuura, vazhinji vekuSoutheast Asia, izvo zvinosanganisira maPhilippines vakatamira kuAFA muhuwandu hukuru vachitsvaga mikana yebasa yakasiyana siyana.
Chikamu chikuru chevagari chakanyanya kutarisana nemaguta nemumativi maviri, kunyangwe nzvimbo yeAl- 'Ayn yekumukati meguta rekugara yakawedzera kuva nzvimbo huru yevagari.
Tsika dzetsika dzeUAE dzakadzika midzi muIslam uye dzinoenderana nenyika yakafararira yeArab, kunyanya nenyika dzakavakidzana dzePersian Gulf. Nyika yakakanganisika zvikuru nekutanga kweIslam, kunyangwe chiIslam muEmirates hachina kuita seSaudi Arabia. Kunyangwe mumadhorobha uye nharaunda inowedzera yevatanhamari, hunhu hwedzinza muUnited Arab Emirates hwakaramba hwakasimba.
Hupfumi hweUAE ipeturu inotengeswa hupfumi, hunogadzirwa zvakanyanya neA Abu Dhabi Emirate. Iyo ine imwe yehukomba hukuru hwekuchengetedzwa kwemafuta epasi rose, ayo anobatsira zvikuru kubhajeti yenyika.
Nekudaro, hupfumi hweEmirate yeDubai hwakanyanya-hukawanda-hwakasimbiswa nemafuta, ndicho chikonzero chinoita seyekutengeserana nehupfumi hwemari yenyika uye inotungamira nyika mukusiyana kwehupfumi.
Kugadzirwa kwekurima kwakanyanya kunowanikwa muRaʾs al-Khaymah uye Al-Fujayrah Emirates. Nekudaro, izvo hazvipire zvakawanda kune chakakora chigadzirwa chechigadzirwa uye chinoshandisa zvisingasviki chegumi-chimwe chevashandi.
Iyo Burj Khalifa ndechimwe chezvivakwa anozivikanwa muUnited Arab Emirates uye ine musoro wechivakwa chakareba kwazvo pasi. Kwete kungobata zita iri chete, asi zvakare ndeyakareba kupfuura mamwe mamiriro epasirese, nzvimbo yepamusoro yekutarisa munyika uye chinosimudzira chinofamba chinhambwe chakareba kwazvo pasirese. Iyo panoramic maonero pamhiri peEmirate yeDubai uye nekupfuura chiratidzo chekuona kune vakawanda vashanyi vanoshanya.
Jebel Jais ndiyo yakakwira kwazvo muUnited Arab Emirates uye iri muEmirate yeRas Al-Khaimah. Munguva yakapfuura, zvaive zvakaoma kuwana, asi nekuda kweiyo switchback mugwagwa uyo unotenderera uye unotenderera nzira yese kukwira gomo, zvave nyore kuwana mumakore apfuura.
Iyo Louvre ndiyo UAE inyowani uye inoshamisa kwazvo miziyamu. Zvinotora vashanyi kuburikidza nerwendo renhoroondo yevanhu nezvinhu zvakavezwa kubva kumakona ese epasi uye kubva pazera rakasiyana kuratidza maitiro netsika dzakaganhurirwa. Iyi inonakidza museum ine zvese, kubva pakutanga nhoroondo kusvika kune makuru makuru e empirical makore uye hunyanzvi hwemazuva ano. Iyo yekupedzisira-yazvino yezvivakwa ndeyekutarisa.
Nenzvimbo yakakura kudaro yemahombekombe, hazvishamisi kuti iyo UAE ine mabhuru mazhinji akakura. Mamwe acho anosanganisira mahombekombe eguta pamwe nemhenderekedzo yeDubai akapatsanurwa nekwakakwira shongwe kumashure, mahombekombe egoridhe akatevedza mahombekombe egungwa echiwi che Abu Dhabi, kubva kuAjman kuenda kuEmirate yeFujairah.
Sarudzo idzi hadziverengeki. Zvakare, kune yakazvimiririra matombo ejecha anowanikwa pane dzakawanda hotera hotera muDubai uye Abu Dhabi, iyo inogona kushandiswa nevasiri vashanyi pamubhadharo wezuva. Mazhinji enzvimbo dzekutandarira anopa mvura-mitambo sekudyira, jet-skiing, snorkeling uye kusimuka paddleboarding.